Apple na-edozi Mac Ethernet ahụhụ, "Chee echiche dị iche" ka dị ndụ na Apple, nke ise betas maka sistemụ na-abịanụ na-abịakwute ndị mmepe, na ọtụtụ ndị ọzọ. Kacha mma n'izu na m si Mac | Esi m mac
Apple na-edozi Mac Ethernet ahụhụ, "Chee echiche dị iche" ka dị ndụ na Apple, nke ise nke usoro ndị na-abịanụ na-abịakwute ndị mmepe, na ọtụtụ ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac
Morningtụtụ ọma ma nara gị otu izu na mkpokọta nke izu na blọọgụ anyị, nke kachasị mma n'izu ahụ na Soy de Mac. Obere aka fọdụrụ maka ụbọchị nke ekwuru na Apple Keynote ga-abata na nke ahụ bụ na ihe karịrị izu abụọ anyị ga-enwe ọhụrụ ngwaọrụ na apụl ika ahịa.
Otú ọ dị, ọ dịghị ozi a na-atụ anya na Mac ma dịka anyị niile maara, a na-echekwa akụkọ ndị a maka June, mgbe a na-eme Apple WWDC 2016, ebe egosiputara nsụgharị sistemụ ndị a, n'etiti ihe ndị ọzọ.
Ọ bụ ezie na anyị amalitela ikwu maka Macs nwere ike Apple nwere ike iweta na WWDC ọzọ nke 2016, anyị na-amalite site na icheta nsogbu nke Mac nwere ọdụ ụgbọ Ethernet tara ahụhụ na mmelite kachasị ọhụrụ nke OS X El Capitan. Nwelite nchedo kachasị ọhụrụ "031-51913 Incompatible Kernel Extension Configuration Data 3.28.1" ahapụla njikọ ethernet, na-eme ka ọ ghara ikwe omume iji ebe ọ hapụrụ onye ọkwọ ụgbọ ala Mgbasa ozi BCM5701 nwere nkwarụ na ndepụta oji wee bịa na ọtụtụ ụdị Mac enwere ugbua ihe ngwọta ị ga-ahụ ebe a.
Nkwụsị na-esote na nchịkọta anyị taa bụ akụkọ na-ekwu maka mmegharị nke ikike, site n'aka Apple, nke ika ahụ n'oge ahụ mere ka ngwaahịa Apple dị iche. Anyị na-ekwu okwu banyere ika «Che iche”, nke ejiri mee ihe na nke mbụ na mkpọsa ụlọ ọrụ na 1997. Ugbu a ha chọrọ imeghari uzo ha ga-esi tinye oge ahụ ma anyị amatala na ha akọwapụtala nke ọma usoro ntinye nke akara.
Ọhụrụ ka OS X? E nwere ọtụtụ ndị ọzọ ọrụ ndị na-ekpebi iru ụwa nke Apple na kọmputa ha. Agbanyeghị, dịka anyị niile ndị mara OS X, ọ bụ ezie na ọ dị nnọọ mfe karịa Windows, ọ chọrọ oge ọzụzụ. Ọfọn, ọ bụrụ na ị bụ ụwa ọhụrụ nke OS X na kọmputa Apple, tupu ị na-arahụ ụzọ ọhụụ nke ọ na-arụ, enwere m ndụmọdụ ka ị gaa Apple nkwado website. Eeh, websaịtị nkwado Apple, bụ nke a na-eleta naanị mgbe anyị nwere nsogbu na akụrụngwa yana sistemụ arụmọrụ.
Izu a ahọrọwokwa ndị si Cupertino ka ha mee ka betas nke ise dị maka ndị mmepe nke ihe ga-abụ sistemụ na-esote, maka iDevices na maka Mac, ọgbọ nke anọ Apple TV na Apple Watch.
Ọ bụ ezie na Apple na-etinye anụ ahụ niile na imi ihe, anyị nwere ike ịgwa gị na Samsung anaghị agbada n'azụ ma ha chọrọ inye mgbanwe mgbanwe na ọkọlọtọ ọhụrụ ha. Ha bụ ụlọ ahịa na-azọ mpi na Apple Store na mgbe ị gụrụ ihe anyị gwara gị n'isiokwu a, ị ga-amata na ha na-aga nke ọma.
Anyị na-ekwu maka ọtụtụ izu ugbu a banyere nsogbu nke nchekwa nke ngwaọrụ Apple na nsogbu Tim Cook n'onwe ya nwere, dị ka CEO nke Apple na FBI n'onwe ya. Dị ka ị maara, Apple jụrụ ịmeghe iPhone na FBI ma n’ihi nke a ha anatawo ọchịchọ n’aka ha site na mgbakwunye na inwe ido onwe ha n’ụlọ ikpe na nke a. O yiri ka Apple ọ ga-arụ ọrụ na a zuru iCloud usoro izo ya ezo nke mere na ọbụna Apple nwere software injinia nwere ụzọ nke inwe ike decrypt ọdịnaya nke a ụfọdụ iCloud akaụntụ na ha onwe ha na sava.
Guysmụ okorobịa na ụmụ agbọghọ, anyị kwụsịrị mkpokọta a na-echetara unu na Apple gbaziri ụlọ nkwakọba ihe dị n ’aka 8.900 na Sunnyvale, California Pepsi ji mee ihe tupu dị ka osisi na-agba agba maka ngwaahịa gị. Islọ ọhụrụ a kwenyere na ọ ga-abụ akụkụ nke ebe ọzọ ebe a ga-eme ule nke ọtụtụ ihe banyere Titan oru ngo, nke a na-akpọkarị Apple Car.
Ma ruo ugbu a izu a chịkọtara. Echi anyị ga-aga n’ihu ịrụ ọrụ ka ụnụ wee nwee ike ịnụ ụtọ akụkọ na akụkọ ụwa nke apụl tara, bụ nke mechaa bụrụ ụzọ ndụ ọtụtụ n’ime anyị. Daalụ maka ịgụ!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple na-edozi Mac Ethernet ahụhụ, "Chee echiche dị iche" ka dị ndụ na Apple, nke ise nke usoro ndị na-abịanụ na-abịakwute ndị mmepe, na ọtụtụ ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac
Nje virus ọhụrụ maka Mac OS X nwere ike ime ka draịvụ ike gị ghara ịba uru